उपसचिव समायोजन आजदेखि
2075-10-20 / Source: kantipurdaily.com / 2.2K 0
काठमाडौँ — सरकारले समायोजनमा जाने उपसचिवलाई आइतबारबाट समायोजन पत्र दिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले आइतबारदेखि उपसचिवले आफूले रोजेको स्थानीय तह, प्रदेश या केन्द्रमा जान समायोजनपत्र बुझ्न थाल्ने जानकारी दिए ।
उपसचिवले आफ्नो समायोजनपत्र आफैं प्रिन्ट गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनका अनुसार आइतबार करिब २ हजार जनाले अनलाइनबाट आफ्नो समायोजनपत्र प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् ।
‘अनलाइन फाराम भर्दाकै पासवर्ड प्रयोग गरेर उपसचिवले अनलाइनबाट समायोजनपत्र निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’, अधिकारीले शनिबार कान्तिपुरसँग भने, ‘समायोजनपत्रका लागि उहाँहरूले मन्त्रालय धाइरहनु पर्दैन ।’
समायोजन पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत उल्लेख हुनेछ । संघमा समायोजन भएका उपसचिवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा खटाउनेछ । प्रदेशमा समायोजन भएकाहरू सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिर हुनेछन् । स्थानीय तहमा जानेहरूलाई पनि त्यसैअनुसारको व्यवस्था मिलाइएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिएर बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बाट समायोजन सुरु गरेको छ । ५६ सचिवले गत साता मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीबाट समायोजनपत्र बुझेका छन् ।
मन्त्रालयको समायोजन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदार पनेरुका अनुसार सहसचिवहरूको समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अधिकारीका अनुसार प्रशासन सेवाबाहेकका १ सय २ जना सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाइनेछ ।
लोकसेवा आवेदनमा उत्साह बढ्यो, ३ लाख आवेदन, ६ करोड राजस्व संकलन
काठमाडौं। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा झन्डै ३ लाखको आवेदन परेको छ । आयोगका अनुसार आइतबार सा“झ ५ बजेसम्म २ लाख ९३ हजार २ सय ७१ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ । जसअन्तर्गत खुलातर्फ २...
शिक्षक लाईसेन्सको विज्ञापन खुल्यो, पाँच किसिमको विज्ञापन
भक्तपुर - शिक्षक सेवा आयोगले लामो समय देखि रोकिएको शिक्षक लाईसेन्सको विज्ञापन खोलेको छ । माध्यमिक तहको विभिन्न् तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरिएको आयोगका प्रशाशकीय प्रमुख डा. तुलसी...
एक मिनेटमा सयको आवेदन !
काठमाडौँ, असार २ गते । लोकसेवा आयोगबाट खुलाइएको विज्ञापनमा आवेदन फाराम भर्ने मिति सकिन लाग्दा भर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएपछि केही दिन फाराम...
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला गरेको छ । ...
काठमाडौं, जेठ ३० गते । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त करिब नौ हजार पदका लागि गरेको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा बुधबार पनि जुलुस प्रदर्शन भएका छन् । झण्डै छ लाख विद्यार्थी लोकसेवाको परीक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहँदा बल्ल...
स्थानिय तह (सहायक चाैथाे) सेट १
स्थानिय तह (सहायक पाँचाै) सेट १
नायब सुब्बा / प्रथम पत्र: नमुना सेट - २७
शाखा अधिकृत नमुना प्रश्नोत्तर १४
Computer Operator - Old Question (2074/05/23)